Yintoni eNtsha kwi-AutoCAD 2012 Icandelo XNUMX -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Yintoni Entsha e AutoCAD 2012, Inxalenye Yokuqala
Yintoni Entsha e AutoCAD 2012, Inxalenye Yokuqala
Okokugqibela, kwaye njengoko bekubhengeziwe ngalo mhla, i-AutoDesk ilungiselele lonke ulwazi olunxulumene nezinto ezintsha ze-AutoCAD 2012. Ngendlela efanayo, oko kuthetha ntoni kolunye uqeqesho, ngaphandle kwe-AutoCAD ye-Mac, esese into esiyibonileyo kunyaka ophelileyo kuhlobo luka-2011.
Ukususela ekuqaleni, kuyasivuyisa ukwazi ukuba ifomathi yefayile entsha ye-dwg khange ibe yimfuneko, ifomathi ka-2010 igcinwa ukuyithumela ngeenguqulelo ezindala kwi-AutoCAD 2010 kuya kufuneka ukuyiguqula nge-TrueView. Nangona i-AutoDesk inyanzelisa ukuba i-dwg yayo iliza elisezantsi kwisiphekepheke esingaziwa mntu, ngenxa yomyalezo ovelayo xa kuvulwa ifayile nge-gvSIG, Microstation, Bricscad okanye nayiphi na enye isoftware enokuthi ngoku ivelise i-dwg. Undikhumbuza ngeso sigwebo sakudala wawufuna ukuba nefomathi kwaye nangona unelungelo lakho, kubonakala ngathi akuyomfuneko kum ngokungathi yintsholongwane.
Kwakhona, kuyathakazelisa ukwazi ukuba le nguqulo entsha isekela iinkqubo ezifanayo, ukwenzela ukuba ukuba unekhadi levidiyo okanye ikhomputha iprojekthiI-Tiple inokuvakalelwa umahluko xa wenza iinkqubo ezifana nokunikezela kunye nokukhangela kwiimbono ze-3D.
Kwaye enye into, esiyithandayo kukuba ukwazi ukuba le nguqulo inokukhutshwa ngokusemthethweni ngenjongo yokuvavanya, nangona le nguqu isebenza ngokupheleleyo kwiintsuku ze-30.
Ukusuka apha unako khuphela i-AutoCAD 2012, mahhala.
Ndifuna ukujongana neminye imicimbi ngokweenkcukacha, ngakumbi kuba utshintsho oluninzi luyafana noko kwenziwe yiBentley kwiMicrostation V8i, nangona kunjalo kuninzi lwe-AutoCAD 2012 edlula kuyo. Kule ndlela yokuqala ndifuna ukuchukumisa kwinto enxulumene nokwakhiwa kwedatha kunye nokuboniswa kwemveliso.
Akukho ndaba zininzi malunga noku, iyaqondakala kuba eyona nto intle enokuzanywa yi-AutoDesk kukuphucula iindlela ezikhoyo. Ngesi sizathu, izixhobo eziphuculweyo ziyabonakala, zisenza izinto zibe namandla ngakumbi kwaye zifumane ngakumbi kuncedo lwegraphic; nangona kusetyenziswe kakhulu ukuphuculwa kwenguqulelo ka-2011:
Ukuphucula i-Spline. Siyakhumbula ukuba i-spline yinto enobungqingili obukhunjulwayo obuthatha ama-vertices emoyeni; Kwakunzima ukuba ayinakuphathwa njenge-polyline kwiinkalo ezifana nokubala okanye ukusika.
... ngomhla wam ndasebenzisa oku ukwenza imigca yeembalo ...
Kaloku iyakwazi ukunyangwa malunga ne-a umgca ohlakaniphile kwiCorel Dweba, yongeza kwaye uphinde ususe ii-vertices, kwaye uguqule imivumbo kwi-arcs. Nokuba ukhetho lubiziwe sixhobo soxube ivumela ukuba senze i-spline ngoncedo apho sifuna khona ukuhamba khona.
Ngendlela efanayo sibona kwenzeka ntoni na Qhekeza, Okwexesha elithile ngoku, ukuphathwa kweepateni kuye kwaphucuka, ukuze zibe namandla. Kodwa ngoku i uqala banesistim ngakumbi kwaye kuyafana nakwi-gradient.
Ezi zibonelelo zenkqubo ezinje ngobungakanani, iiarcs, iiellipses, iipolines zelayini, ubuso, iinkokeli, nangona ezi zilandelayo zibandakanya okungaphezulu kunoko kuba kukho ulawulo ngakumbi lweendawo kunye nokusondela kwesicatshulwa. Isampulu ndiyakushiya le vidiyo indlela esebenza ngayo
Phakathi kweyona nto inenzuzo yolu nyathelo olomeleleyo olunikezelwe izinto yiyo Umyalelo womyalelo, yona ngoku eba yinto eguqukayo kwaye hayi ulungelelwaniso olulula lwamanani akhululekileyo. Emva kokwenza ulungelelwaniso, izinto zigcina ubudlelwane, nokuba zilayini, ukugoba okanye imeko ye-3D, kuxhomekeka kuhlobo lwamalungiselelo. Kukhulu, kuba ngoku uyilo lunokuphathwa ngobugorha obukhulu, njengemivalo yeJoist, ukukwazi ukuguqula ipateni yomgama, isikali, umgama okanye i-engile ngaphandle kokuphinda ubhale kwakhona nokuba sitshintshe ukuphakama.
Ngaphandle koko, iArray inokukhutshelwa, nokuba ayibonakali ngathi. Unokuthi, ndifuna ukukopa olu hlobo lwamalungiselelo, njengoko kunjalo kwimivalo yeJoist efanayo, ukusukela kweli nqanaba, ukuya kuthi ga ngoku. Oko kuyakwenza iipateni ezinje ngee-bleachers, izitulo ezibekiwe, izibane kwigumbi, imithi, njl. Banokukhutshelwa ngendlela esisebenzise ngayo umlinganiso womyalelo ngeebhloko, ngokungafaniyo oku kugcina unxibelelwano kunye nokunxibelelana kwento yokulungelelanisa.
Ukucoca kwakhona. Oku akuqhelekanga kuthi abo basebenzise izixhobo ze-GIS, apho ukucoca i-topological kubandakanya ukususa ukungcola. Ngoku i-AutoCAD 2012 isebenzisa iqhosha lezinto eziphindiweyo.
... bekuya kuba luncedo gqitha xa ndandinomncedisi omhle owaphindaphinda kabini izalathiso kumzobo ofanayo ...
Okunye kunye nomzobo olungisiweyo. Le yenye yezona zinto zibalaseleyo eziye zafezekiswa yi-AutoCAD, kule nguqulelo ka-2012 into entsha kukuba inokwenziwa kubulelwe ukubhabha kubonelelo lwezixhobo ezibonakalayo kwinto nganye ebonisiweyo. Kwi le vidiyo Unokuyibona isebenza, inomdla, ukusebenza oku kule nto esiyisebenzisayo ukwenza izinto ezinobunye.
... njengomzekelo umzobo weenkcukacha zensimbi eneempahla ... yintoni ubuhlanya! ukuba inani liye latshintshwa kwaye umphathi wayefuna ukugqamisa iingongoma ekupheleni.
Iindaba kwiRibhoni. Kuye kwongezwa ukufikelela okuthakazelisayo okubizwa ngokuba yi-Content Explorer, oku ndikhumbuza iindlela ze-ArcCatalog, ukuze ungazikhohlisi ekukhangeleni iifayile kwiWindows Explorer.
Kuyafana nale nto, ukufikelela kwi-AutoCAD Exchange kwongeziweyo, eyayibukwa ngaphambili kodwa ingabikho kwideskithophu, kodwa izihloko zombhobho ziya kuthinteka kwelinye isithuba njengoko kukho ukuphucula kumntu abafanelwe yinto ethile.
Umda wolawulo, uyafa kodwa uhlala. Oku kuye kwabuzwa, njengoko lilifa leedinosaurs. Kodwa ukufikelela ngokukhawuleza komyalelo kuhlala kuyinto eqhelekileyo kubenzi beekhathuni; Ndabona ngakumbi xa iRibhoni yeza kusidida kwi-AutoCAD 2009.
Ngoku umsebenzi ongagqibekanga ungeziwe, ngokufanayo nento esiyenzayo kuGoogle, sichwetheza igama. Kuya kuba yimfuneko ukubona ukuba iyabetha na, kuba uninzi lunokulahleka phakathi komyalelo ofanayo, mhlawumbi kuya kuba luncedo ukuba uphando lube nobukrelekrele kwaye lubuyise imiyalelo esiyisebenzise kakhulu kuluhlu okanye isikhumbuze i-hotkey ukuze ihlale. .
Uncedo lokuphucula umphumo. Kukho iindaba eziye zalibaziseka, kodwa ukuba zifikile zamkelekile. Kule nto kubonakala kum ukuba i-AutoDesk kunye neBentley bayalumkisa ukuba bangafihli umzuzu, besinokuphucuka ekuphatheni imibala kodwa ngenxa yezizathu ezingaqhelekanga izicwangciso ezenziwe kwi-CAD (xa kuthelekiswa ne-GIS) zijongeka ngcono kwi-monochrome kunemibala.
Uphuhliso oluphuculweyo. Le ayisiyonto intsha yale nguqulelo, ivela kuhlobo luka-2011 kodwa kule yenziwe yabonakala yi-AutoDesk kugxininiso olukhulu kwaye njengoko sibona eminye imisebenzi eyongezelelweyo ifakiwe. I-Microstation iyiphumezile isuka kwi-XM, kodwa into eyenziwe yi-AutoDesk iyaqhubeka, njengoko sibona kuyo le vidiyo.
Umsebenzi wokungafihli bobabini kukwipaneli yepropathi yento nganye, kunye nakumphathi wokufaka ukufaka umaleko wonke. Ukongeza, inokusetyenziselwa ubeko lokushicilela kwaye ivele ngokwemeko evela kumacala aliqela; Ndicinga ukuba oku kuyakuchaphazela ukubonwa kwanangexesha lokuzaliswa kwegradient kungenile.
... kuze kube namhlanje (unyaka ngaphambi kwesiprofeto seMeya) sinokuphrinta izicwangciso kunye ne-orthophoto ngemibala phantsi ...
Okunye ukuphuculwa koMgaqo. Ukhetho lokulinganisa longeziwe kwizichaso, oku kunceda ukunqanda ukuphatha izitayile kwizicatshulwa ezisebenza kuphela ekubhaleni iimbono. Ukongeza, umphathi wephepha uyafana ncam noko kwenziwa yiMicrostation ngeModeli, kodwa incasa encinci kunye nokunxibelelana kwiwindows ethe nkqo eya kuthi ngokuqinisekileyo incede ekuphuculeni ulawulo lwemveliso.
Uxwebhu oluphezulu Le yeyona nto ilungileyo, nangona ndingakwazi ukuyigaya okwangoku. Umfanekiso uliguqule ihlabathi lajikeleza umhlaba, kodwa bambalwa kuthi abaye bayicinga le nkqubo thina bantu bangabemi.
Kodwa ngokuqinisekileyo abasebenzisi be-Autodesk Inventor baya kuxhamla kuyo, kuba ngoku kungenisa izinto ezinjengeSolidWorks, Pro / ENGINEER, CATIA, Rhino kunye ne-NX.
Okokugqibela, andifuni ukungahoyi into endiyibonileyo xa kuveliswa iifayile ze-pdf. Omnye umba nawo ongazange ufike kwiziqhamo, hayi ngoku.
Gcwalisa iifayile zepdf. Le ayisiyonto intsha, kodwa kukuphuculwa kokusebenza okuvela kuhlobo 2010. Ayithumeli ixesha kuphela, kodwa ungachaza ukuba ithumela yonke ifayile, ukuba ithumela umaleko omnye kuphela, ubeko okanye ukuba ishiya amaphepha amaninzi .
Emva koko, unokukhetha isisombululo semifanekiso kwaye ukuba ufuna iifonti zingeniswe. Oku kuthatha ithuba elikhulu kwifayile ye-pdf evelisiweyo, kuba apho unokucima okanye uvule, iyandikhumbuza uninzi lweenkqubo ezinje ngeCorel Draw kunye neAdobe Illustrator ezenza ixesha elide ... kunye nezinye iinkqubo esele zisenza oku kangangeentsuku.
Kwimeko ye-Microstation, ukuba i-pdf ayenziwanga kunye nenketho ye-3D ayifani nezohlu ezihlukeneyo; Akukho zikhetho ezininzi zokuqwalasela iimeko zokuphuma nangona zithunyelwa kwi-PDF kwiminyaka eyi-10 edlulileyo.
Apha banako bukela ividiyo indlela i-pdf isebenza ngayo kwi-AutoCAD 2012.
Inkcazo eFayiliweyo. Inyani yile yokuba ukuvelisa iifayile ze-pdf ayisiyonto intsha, kodwa ngaphaya koko ndiyithandile into eyenziwa yi-AutoCAD 2012 ngokubiza ifayile ye-pdf njengesalathiso kunye nokunxibelelana nayo. Ngelixa oku bekujikeleze iminyaka emibini (i-AutoCAD 2010), i-AutoDesk ngoku yenza ingxolo ngakumbi ngokusebenzisa izincedisi ezincinci kodwa eziluncedo.
Akunambi, eyona nto ibhetele ndiyibonile ekusebenzisaneni namafayili e-PDF aqukethe izalathisi zevector kuba phakathi kwezinye izinto unako ukuzenza:
Yenza isiqeshana ukufihla iingxenye zeenqwelo
jolisa kule ndlela usebenzisa i-snap kwi-pect vectors
Vala okanye kumacandelo e-PDF
Ngamafutshane, kungekuphela kokukhetha ukukhetha uhlanganise o ikopi yocingo kwaye siyizise kwi-dwg kwaye besizakuyenza. Kwimeko ye-Microstation, i-pdf inokuthi ichazwe kodwa iziphatha ngokungathi ngumfanekiso, ayinakwenziwa i-snap okanye uxhumane naye iziqendu kwaye ndivakalelwa kukuba bobabini abancedi ngokukhawuleza ukuba baqonde i-georeference ye-pdf.
Ewe, ukuze ndingenzi iposti efikelela kumsele waselwandle, ndihlala apha kunye nolu phononongo lokuqala lwezinto ezintsha ze-AutoCAD 2012. Siyaqhubeka kule ilandelayo.
Eli nqaku lisishwankathela iindaba ze-AutoCAD 2013
10 egeomates March 2011
Kutheni kunzima kangaka ukuba umfazi alale?
UCarlos, ukubeka umbhalo kumgca ngumyalelo we-Arctext
ULuis, olu luhlu lwawo wonke umyalelo we-AutoCAD, kunye ne-alias yabo kunye nomnyaka wokuphunyezwa
Uphando oluphuthumayo nge-porfa!
Ndifuna ukubeka itekisi ephakamileyo kwaye andinakufumana itekisi ecacileyo kwi-Autocad 2012 ye-MAC, kodwa ukuba umntu uyazi ukuba yenziwa njani, ndiyakuyixabisa!
Izibingelelo ezivela eChile 🙂
Ndifuna ukwazi ukuba yeyiphi imiyalelo kunye neempawu zabo kunye nomsebenzi wabo
Zama ukwenza ngeendlela ezimbini ezintsha, ezenziwe ngokutsha.
Qinisekisa ukuba awufuni ukwenza i-fillet nezinto ezise 3D kwaye ezingagqithwanga, ukuba awuzami nezinto zefayile yereferensi yangaphandle, engabikho mithombo emininzi, okanye ukuvimba.
Elias Sánchez uthi:
Ndineengxaki ngomyalelo weFillet, indinika le mpazamo ilandelayo xa ndizama ukufaka umzobo “Ifillet ifuna imigca emi-2, ii-arcs, okanye izangqa (hayi ibhloko yezalathisi).” Kwi-autocad ka-2010 ndiyidibanisa ngaphandle kweengxaki kodwa kule 2012 indinika le mpazamo, ndilindele impendulo yakho, enkosi.
IMarco de Chile uthi:
Ndatshelwe ukuba i-2012 version ine-umyalelo okanye umsebenzi ohambelana nomxholo weenguqulelo zangaphambili. Ndiyifake ngesiNgesi kwaye andikwazi ukufumana oku. Ngaba umntu unokundinceda? Siyabonga kwangaphambili! Ukubulisa kubo bonke.
kubiwe mauricio vilugron uthi:
kulungile enkosi kakhulu ngoncedo lwakho kunye nokufumaneka ..
Abaphengululi, ukucinga kwakhona, cinga kwakhona iingongoma kwikota.
Ukuba uhlala ngaphezulu, ubala kwaye ubeke ngaphezulu, kodwa uhlala usebenza ngamaphuzu.
Kodwa ngeli xesha lokucingisisa kwakhona, ngaba ijika liza kuphinda liyiqwalasele?
Musa ukukhwela ijika, kodwa i-polygonal ehamba kuzo zonke izikhululo ofuna ukuzithumela kwi-GPS, kufana noko uyenzayo ngokulungelelaniswa ngokuchanekileyo.
Ndinomdla wokunyuka kulungelelwaniso, egobile ngezikhululo zonke iimitha ezi-5 (umzekelo), umbuzo wokuqala ngulo, ukuba ulungelelwaniso olugobileyo luphakanyisiwe kwi-GPS, ngendlela efanayo nolungelelwaniso oluthe nkqo?
Ndiphulaphula impendulo yakho
Yintoni onomdla wokulayisha?
Izikhululo ze-axis ephakathi?
Bathumele ngaphandle kwifomathi ye-gpx, igophe alizukuboniswa, kodwa ipholigoni. Ukusondela kwakho ukuvelisa izitishi, ulwazi oluninzi malunga negophe oya kuba nalo.
molo, ndifuna ukwazi ukuba ngaba umntu othile angandinceda na ukuba angenise njani ulungelelwaniso olugobileyo kwi-gps (trimble r6)
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba umntu angandinceda na, ndingangenisa njani ulungelelwaniso olugobileyo kwi-gps (trimble R6)
UEvelyn Sossa uthi:
Ndidinga uluhlu lwemiyalelo ye-auto cad ngesiNgesi nangeSpanish, ngaba umntu angandinceda?
Kuyinto engaqhelekanga, andizange ndibone oko kwenzeka kum.
I-Etimados xa kunye izinto ezimbini ziza kuthi: i-crectangulo kunye nomnye umxube, kamva bahlanganiselwe kunye nequmrhu elilodwa lenziwa, ndingayilungisa njani le nto? nceda uncede
Xa usenza ii-pdf's nge-autocad 2012, i-corel zoba i-x5 ayiziboni. Ngezinye iinguqulelo ze-autocad akwenzekanga. Ndifuna ukwazi indlela yokulungisa.
Kusadangalisa ngokuphathelele kwinkqubo yespredishthi yefestile, kukho ukungabikho kwemithetho, isizathu sokuba andiyikuzichaza yona
Óscar Lombana uthi:
Kuhle, ndingathanda ukwazi ukuba kwenzekani nomyalelo we-3d, ndibone ukuba kwi-2012 ayisekho, apho ndingayifumana khona.
HIDELEMIN SAC uthi:
Uninzi HA YONA ENTSHA AutoCAD imithetho 2012 babacela 3D MAX !!, ngoku ukuba onazo nkqubo njengokukhuphela imithetho yakho !! YONKE INKOSI, NOKUBA UKUYISHA!
Ngomhla ndingathanda ukubona ukuba umntu unokundinceda kumba wokudweba umgca nomgama kunye ne-azimuth ngaphakathi kwenkqubo ye-Quantum Gis
Xa ucofa kwi-"Mem Patch" ivelisa impazamo elandelayo: "kufuneka ufake i-patch xa isikrini selayisensi sivela" kwaye ayindivumeli ukuba ndiqhubeke nofakelo kuba indinika ikhowudi yokuvula engaphelelanga; Ndingayisombulula njani le ngxaki?
En http://www.peruviantec.tk kukho ezinye zevidiyo ze-200 ze-Autocad kunye neendaba ze-Autocad 2012 mahala ngesiSpanish.
Ndiyabulela uJorge, bekuyiminyaka ukususela ekubeni i-AutoCAD inokulinganiselwa.
UJorge Eliecer Garces Bolivar uthi:
Ezinye izabelo ze-AutoCAD 2012 yinto yokungenisa imifanekiso yezinye iifom ezidinga ngaphambili njenge-AutocadMAP ukuba zifake njengesiqingqiweyo se-raster.
Okulandelayo amafomati e-AutoCAD 2012 axhasa kunye ne-LT 2012 version (Ngonyaka ngamnye i-AutoCAD LT ifaka amathuluzi angaphezulu epheleleyo)
Iifayile ezikhawulezayo ezixhaswayo:
.bmp, .cals-1, .dds, .doq, .ecw, .flic, .geospot, .hdr, .ig4, jpeg, jpeg2000, .jifif, .MrSID, .NITF, .OpenEXR, .pcx ,. pict, png, .psd, .rlc, .targa, kwaye ixhasa imifanekiso TIFF ne ephakamileyo.
Ndiyathemba ukuba igalelo liya kubanceda.
Kude ixesha elizayo
UJorge Eliecer Garces Bolivar
Enzo B uthi:
kulungelelwaniso olwenziweyo kokubini kumaleko kunye nezinto kunye nokuveliswa kwepdf ndiyifumana sele ikwi-autocad 2011 ... kwinto endiyifundileyo andifumani mehluko kwezi zihloko zimbini phakathi kwe-autocad 2011 kunye ne-autocad 2012, ngaphandle kokuba bongeze iinkcukacha encinci ekuphatheni kwakhe angakhange akubone.
Enrique Montejo uthi:
Ulwazi lwakho luncedo kum nomsebenzi wam njengomfundisi weyunivesithi.
Ndibaxabisa kubo kwiDO.ANZ.ve